पशु चिकित्सक तिवारीको ओमानमा मृत्यु - प्रवास - कान्तिपुर समाचार
पशु चिकित्सक तिवारीको ओमानमा मृत्यु
काठमाडौँ — पशु चिकित्सक डा. विष्णुबाबु तिवारीको सोमवार ओमनमा मृत्यु भएको छ । ओमनको रोयल दिवान कोर्ट अन्तर्गत अल वस्ता जंगली जनावर संरक्षण केन्द्रमा कार्यरत तिवारीको सडक दुर्घटनामा ज्यान गएको हो ।
भरुभुमिमा रहेको जनावारलाई पानी लिएर गएको ट्याङकी पल्टदा उनको ज्यान गएको हो। ट्याङकर चालक भने सामान्य घाइते छन्।
उनी दुखुम क्षेत्रस्थित भरुभुमिका रहेका जंगली जनावरको उपचारमा सक्रिय थिए। उनी दिवान कोर्टमा २०१४ देखि कार्यरत थिए। उनको शव स्थानीय अस्पतालमा राखिएको छ। शवलाई मस्कटमा ल्याई नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको छ। दुर्घटनास्थल मस्कटमा झन्डै ७ सय किलाेमिटर टाढा पर्छ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ १३:४८
कांग्रेस नेताहरुको दौडाहा विदेशमा पनि !
भदौ ३० बाट पौडेलको दश दिने युरोप अभियान
काठमाडौं — कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीको जनसम्पर्क समितिले आयोजना गरेका कार्यक्रममा भाग लिन १० दिने युरोप भ्रमणमा निस्कने भएका छन् ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने भएकाले जिल्ला दौडाहसँगै नेताहरुको विदेश जाने क्रम समेत बाक्लिन थालेको छ। १४ औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर जनसम्पर्क समितिलाई आ–आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले गर्दै आएका छन्।
युरोपमा संस्थापन र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष निकट रहेका छुट्टाछुट्टै क्षेत्रीय संस्था समेत सञ्चालनमा छन्। युरोपभरीका जनसम्पर्क समितिका गतिविधिलाई समन्वय गर्न युरोप कांग्रेस र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति गरी दुई छुट्टाछुट्टै समिति सञ्चालनमा आएका छन्। युरोप कांग्रेसलाई संस्थापन र समन्वय समितिलाई पौडेल पक्षको साथ रहँदै आएको छ।
पौडेलले युरोपका ८ देशमा जनसम्पर्क समिति र पार्टीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी बन्न भदौ २९ अर्थात् सेप्टेम्बर १४ मा बेल्जियम जाने भएका छन्। उनको पहिलो कार्यक्रम सेप्टेम्बर १५ मा लग्जम्बर्गमा छ। जनसम्पर्क समिति लग्जम्बर्गको अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा सकेर पौडेल बेल्जियम फर्कने छन्।
बेल्जियममा सेप्टेम्बर १७ मा हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुनेछन्। १०५ औं बीपी जन्म जयन्तिका अवसरमा जनसम्पर्क समिति बेल्जियमले ‘वर्तमान परिप्रेक्षमा लोकतान्त्रिक समाजवाद’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
सबैभन्दा बढी नेपाली रहेको बेल्जियम नेताहरुको केन्द्र समेत बन्ने गरेको छ। जनसम्पर्क समिति बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटाका अनुसार बेल्जियमको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि पौडेल फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी र नेदरल्याण्डको कार्यक्रममा सहभागि हुनेछन्। उनी २६ सेप्टम्बर मात्रै नेपाल फर्कने छन्।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ १३:४३